ထမငျးစားဖို့ လငျယူစရာမလိုတဲ့ မိနျးကလေးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခနြေိုငျဆုံးပဲ...... - S3k Network
ထမငျးစားဖို့ လငျယူစရာမလိုတဲ့ မိနျးကလေးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခနြေိုငျဆုံးပဲ……
တခြိနျငါ့သမီးလေးကို ပွောပွရမယျ ထမငျးစားဖို့ လငျယူစရာမလိုတဲ့ မိနျးကလေးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခနြေိုငျဆုံးပဲ တခြိနျ သမီးလေး သိဖို့ “ကိစ်စမရှိဘူး ငါတို့ကအခြိနျတနျယောကျြားယူမှာ ယောကျြားကရှာကြှေးလိမျ့မယျ”တဲ့ဘာရယျမဟုတျ ပွုံးတော့ပွုံးမိသား….
၁၆နှဈအရှယျ မိနျးကလေး တဈယောကျရဲ့အတှေးက သိပျရိုးရှငျး တယျလို့တှေး ရငျတှေးလို့ရသ လိုအန်တရာယျ မြားလိုကျတာ လို့တှေးရငျလညျးတှေးလို့ ရနိုငျတာကိုး….သမီးတို့အနနေဲ့ယောကျြားနောကျလိုကျသှားရုံနဲ့အရာရာအဆငျပွသှေားမယျလို့ထငျနကွေတာတှေ
ထမငျးစားဖို့အတှကျ ယောကျြားယူ လိုကျမယျ လို့ခပျလှယျလှယျတှေး လိုကျတာတှသေိပျ မြားနပွေီလားလို့ လညျးတှေးမိပါ့…ခုခတျေယောကျြားတှေ(အမြားစု)က အတှေးအမွငျတှပွေောငျးကုနျကွတာ သမီးတို့မ သိသေးတာ လား?
ယောကျြားတှေ ကအလုပျရှိတဲ့ မိနျးကလေးကိုယျက သိပျရုနျးပေးစရာ မလိုတဲ့မိနျးကလေး ကိုပိုသဘောကကြွ တယျဆိုတာ…ငှရှေိ ရငျရှိ မရှိရငျ ပညာတတျရာထူးရှိမှပိုသဘော ကကြွတယျဆိုတာ…အလုပျလုပျတတျ စီးပှားရှာတတျ အမွငျကယျြတဲ့မိနျးကလေးကို မှပိုတှဲခငျြကွ တယျဆိုတာ..
သူတို့ကိုအစစအရာရာ သိပျမမှီခိုတဲ့အရညျ အခငျြးရှိတဲ့မိနျးကလေး ကိုမှတနျဖိုးပို ထားကွတယျဆိုတာ…ငါ့သမီးတို့သိအောငျပွောပွ ခငျြပါဘိ…ယောကျြားလုပျစာလကျဖွနျ့တောငျးပွီးအိမျမှာပဲ ထမငျးခကျြ ကလေးထိုငျမှေးမယျ့မိနျးကလေးမြိုးကိုသိပျမရှေးခငျြကွတော့ဘူးဆိုတာလညျးပွောပွခငျြသေးတယျ(တခြို့တှကေိုဆိုလိုတာနျောအားလုံးလို့မပွောဘူး)
ခုခတျေယောက်ခမတှကေရော…..အိမျပျေါတကျလာ တဲ့ခြှေးမကိုဘယျလိုကွို ဆိုကွသလဲဘာပညာမှမတတျဘာအ လုပျမှမလုပျတတျဘယျနေ ရာမှဝငျမဆနျ့ တဲ့မိနျးကလေးမြိုးကို ဝမျးသာအားရကွိုဆိုမယျ့ယောက်ခမ မြိုးသိပျကိုရှားသှားပွီ ဆိုတာငါ့သမီးတို့ သိပါလစေ…
အိမျထောငျမပွုခငျ လူ့လောကအတှကျ အခကျအခဲတှတှေရေ့ ငျရငျဆိုငျနိုငျအောငျ မိဘတှကေလကျနကျမြိုးစုံ တပျဆငျပေးနတော ကိုငါ့သမီးတို့ သိပါလစေ…ရော့ ပညာလကျနကျငါ့ပညာနဲ့ငါလုပျစားလို့ရတယျ လငျမကျြနှာ ယောက်ခမမကျြနှာကွညျ့ စရာမလိုဘူး
ရော့ အတှေးအချေါလကျ နကျဘယျဟာအကောငျး ဘယျဟာအ ဆိုးငါခှဲခွားနိုငျတယျရော့ အလုပျအကိုငျလကျနကျ ငါ့မှာအလုပျအကိုငျရှိ တယျအသိုငျးအဝိုငျးရှိ တယျငါ့တဈ ဝမျးတဈခါး ငါရှာစားနိုငျတယျ
အဲဒီလို လကျနကျတှပေါသှားတော့ ပိုမကောငျးဘူးလားမှေးရာ ပါလကျနကျဟာ တဈဘဝလုံးအတှကျ အာမခံခကျြ မရှိဘူးဆိုတာငါ့သမီးတို့ကိုပွောပွမယျ့ သူမရှိဘူးလား…ပညာကမစုံအတှအေ့ကွုံကမရငျ့ကကျြအလုပျအကိုငျကမရှိနဲ့လငျယူလိုကျရုံနဲ့ဒုက်ခတှငွေိမျးသှားတာမဟုတျဘူး ငါ့သမီးတို့…လငျယူလိုကျမှဒုက်ခတှစေတာဆိုတာပွောပွခငျြလိုကျတာ…
တကယျလို့မြားသမီးလေးတို့ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ယောကျြားဟာကုတငျပျေါမှာပဲ ခဈြတတျပွီးကနျြတဲ့အခြိနျမှာဘဝရဲ့ဒုက်ခတှအေခကျအခဲတှကေိုမြှဝခေံစားဖျောမရတဲ့ယောကျြားမြိုးဆိုရငျ…လငျယူပွီးမှ ကိုယျ့ဝမျးကိုယျရှာစားနရေပွီးသူ့ကိုပါရှာကြှေးနရေရငျငါ့သမီးတို့အလကားနအေလကားလငျတဈယောကျအဖကျတငျနမှောပေါ့…
ကဲဘဝက ထငျသလောကျလှယျသေးလား?လိုအပျတဲ့လကျနကျမြိုးစုံ အစုံအလငျပါမှလောကကွီးထဲထှကျလိုကျစမျးပါ…ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျနိုငျတဲ့မိနျးကလေးဟာကမ်ဘာပျေါမှာအလှဆုံးပဲ
ကိုယျရပျတညျဖို့ အတှကျဘယျ သူ့ကိုမှဂရုစိုကျ စရာမလိုတဲ့မိနျးကလေးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာအလှဆုံးပဲထမငျးစားဖို့ လငျယူစရာမလို တဲ့မိနျးကလေးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခနြေိုငျဆုံးပဲ ငါ့သမီးတှကေမ်ဘာ့အလှဆုံး မိနျးကလေးတှဖွေဈကွ စမျးပါ
ထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ
တချိန်ငါ့သမီးလေးကို ပြောပြရမယ် ထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ တချိန် သမီးလေး သိဖို့ “ကိစ္စမရှိဘူး ငါတို့ကအချိန်တန်ယောက်ျားယူမှာ ယောက်ျားကရှာကျွေးလိမ့်မယ်”တဲ့ဘာရယ်မဟုတ် ပြုံးတော့ပြုံးမိသား….
၁၆နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့အတွေးက သိပ်ရိုးရှင်း တယ်လို့တွေး ရင်တွေးလို့ရသ လိုအန္တရာယ် များလိုက်တာ လို့တွေးရင်လည်းတွေးလို့ ရနိုင်တာကိုး….သမီးတို့အနေနဲ့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရုံနဲ့အရာရာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်နေကြတာတွေ
ထမင်းစားဖို့အတွက် ယောက်ျားယူ လိုက်မယ် လို့ခပ်လွယ်လွယ်တွေး လိုက်တာတွေသိပ် များနေပြီလားလို့ လည်းတွေးမိပါ့…ခုခေတ်ယောက်ျားတွေ(အများစု)က အတွေးအမြင်တွေပြောင်းကုန်ကြတာ သမီးတို့မ သိသေးတာ လား?
ယောက်ျားတွေ ကအလုပ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးကိုယ်က သိပ်ရုန်းပေးစရာ မလိုတဲ့မိန်းကလေး ကိုပိုသဘောကျကြ တယ်ဆိုတာ…ငွေရှိ ရင်ရှိ မရှိရင် ပညာတတ်ရာထူးရှိမှပိုသဘော ကျကြတယ်ဆိုတာ…အလုပ်လုပ်တတ် စီးပွားရှာတတ် အမြင်ကျယ်တဲ့မိန်းကလေးကို မှပိုတွဲချင်ကြ တယ်ဆိုတာ..
သူတို့ကိုအစစအရာရာ သိပ်မမှီခိုတဲ့အရည် အချင်းရှိတဲ့မိန်းကလေး ကိုမှတန်ဖိုးပို ထားကြတယ်ဆိုတာ…ငါ့သမီးတို့သိအောင်ပြောပြ ချင်ပါဘိ…ယောက်ျားလုပ်စာလက်ဖြန့်တောင်းပြီးအိမ်မှာပဲ ထမင်းချက် ကလေးထိုင်မွေးမယ့်မိန်းကလေးမျိုးကိုသိပ်မရွေးချင်ကြတော့ဘူးဆိုတာလည်းပြောပြချင်သေးတယ်(တချို့တွေကိုဆိုလိုတာနော်အားလုံးလို့မပြောဘူး)
ခုခေတ်ယောက္ခမတွေကရော…..အိမ်ပေါ်တက်လာ တဲ့ချွေးမကိုဘယ်လိုကြို ဆိုကြသလဲဘာပညာမှမတတ်ဘာအ လုပ်မှမလုပ်တတ်ဘယ်နေ ရာမှဝင်မဆန့် တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကို ဝမ်းသာအားရကြိုဆိုမယ့်ယောက္ခမ မျိုးသိပ်ကိုရှားသွားပြီ ဆိုတာငါ့သမီးတို့ သိပါလေစ…
အိမ်ထောင်မပြုခင် လူ့လောကအတွက် အခက်အခဲတွေတွေ့ရ င်ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် မိဘတွေကလက်နက်မျိုးစုံ တပ်ဆင်ပေးနေတာ ကိုငါ့သမီးတို့ သိပါလေစ…ရော့ ပညာလက်နက်ငါ့ပညာနဲ့ငါလုပ်စားလို့ရတယ် လင်မျက်နှာ ယောက္ခမမျက်နှာကြည့် စရာမလိုဘူး
ရော့ အတွေးအခေါ်လက် နက်ဘယ်ဟာအကောင်း ဘယ်ဟာအ ဆိုးငါခွဲခြားနိုင်တယ်ရော့ အလုပ်အကိုင်လက်နက် ငါ့မှာအလုပ်အကိုင်ရှိ တယ်အသိုင်းအဝိုင်းရှိ တယ်ငါ့တစ် ဝမ်းတစ်ခါး ငါရှာစားနိုင်တယ်
အဲဒီလို လက်နက်တွေပါသွားတော့ ပိုမကောင်းဘူးလားမွေးရာ ပါလက်နက်ဟာ တစ်ဘဝလုံးအတွက် အာမခံချက် မရှိဘူးဆိုတာငါ့သမီးတို့ကိုပြောပြမယ့် သူမရှိဘူးလား…ပညာကမစုံအတွေ့အကြုံကမရင့်ကျက်အလုပ်အကိုင်ကမရှိနဲ့လင်ယူလိုက်ရုံနဲ့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူး ငါ့သမီးတို့…လင်ယူလိုက်မှဒုက္ခတွေစတာဆိုတာပြောပြချင်လိုက်တာ…
တကယ်လို့များသမီးလေးတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ယောက်ျားဟာကုတင်ပေါ်မှာပဲ ချစ်တတ်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်မှာဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေကိုမျှဝေခံစားဖော်မရတဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုရင်…လင်ယူပြီးမှ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ရှာစားနေရပြီးသူ့ကိုပါရှာကျွေးနေရရင်ငါ့သမီးတို့အလကားနေအလကားလင်တစ်ယောက်အဖက်တင်နေမှာပေါ့…
ကဲဘဝက ထင်သလောက်လွယ်သေးလား?လိုအပ်တဲ့လက်နက်မျိုးစုံ အစုံအလင်ပါမှလောကကြီးထဲထွက်လိုက်စမ်းပါ…ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးပဲ
ကိုယ်ရပ်တည်ဖို့ အတွက်ဘယ် သူ့ကိုမှဂရုစိုက် စရာမလိုတဲ့မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးပဲထမင်းစားဖို့ လင်ယူစရာမလို တဲ့မိန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချေနိုင်ဆုံးပဲ ငါ့သမီးတွေကမ္ဘာ့အလှဆုံး မိန်းကလေးတွေဖြစ်ကြ စမ်းပါ
မုနျး၍ လညျးကြိနျစာ မတိုကျနဲ့ ခဈြခငျ၍လညျး နောကျ ဘဝပွနျတှေ့ ပါရစေ ဆုမတောငျးနဲ့ ..